खेलाडी र प्रशिक्षकका आँशु पुछ्दिँदै रोईन क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्दा – Rabin's Blog
Buletin Post July 16, 2018 खेलकुद	0
काठमाडाैं । क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिच विश्वकप २०१८ को सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी घाेषित भए । उनले गोल्डेन बल अवार्ड जित्दाकाे क्षण खुसी र भावनाले माहाैल अर्कै बन्याे । त्यही बेला झमझम पानी परेकाे थियाे । क्राेएसियकी राष्ट्रपति काेलिन्दा ग्राबर किटाराेभिकले लुकालार्इ अँगालाे मारेर भावुक भइन् ।
राष्ट्रपति काेलिन्दा खुसी र भावनाले राेएकी थिइन् । माेड्रिच पनि सुनकाे बल उचाल्दा निकै भावुक थिए । एकातिर फाइनल उपाधि जित्न नसक्दाकाे पीडा, अर्काेतिर उपविजेता र सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी घाेषित हुँदाकाे खुसीले उनलार्इ भावुक बनाएकाे थियाे । राष्ट्रपति काेलिन्दाले अाफ्नाे राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक डालिकलार्इ समेत पानीमा लछप्पै भिज्दै अँगालाे मारिन्, दुवै भावुक मुद्रामा थिए ।
क्राेएसियाले राम्राे खेलेर विश्वकै दर्शककाे भावना पाएकाे छ भने विश्वकपकाे उपाधि उचाल्न चुक्दा धेरैकाे सहानुभूति पनि पाएकाे छ । राष्ट्रिय टिमका कप्तान समेत रहेका लुकाले विश्वकपकाे सर्वोत्कृष्ट खेलाडीकाे उपाधि पाउँदा पनि राष्ट्रपति र प्रशिक्षक उत्तीकै खुसी देखिए । लुकाकै उत्कृष्ट प्रदर्शन र नेतृत्वमा क्रोएसिया फाइनलसम्म पुगेको हो ।
विश्वकप २०१८ मा मिडफिल्डर लुकाले क्रोएसियाका लागि दुई गोल गरे । र, दुई गोलका लागि अवसर सिर्जना गरे ।
विश्वकप २०१८ सकिएकाे छ । यसकाे उपाधि फ्रान्सले जित्याे भने गोल्डेन बुट इंग्ल्यान्डका कप्तान एवं स्टाइकर ह्यारी केनले जितेका छन् । साथै युवा खेलाडीको उपाधि फ्रान्सका कालियन एम्बाप्पेले जिते ।
उनले प्रतियोगितामा फ्रान्सका लागि ४ गोल गरेका थिए । १९ वर्षीय एम्बाप्पेले फाइनलमा पनि गोल गरे। विश्वकपको उत्कृष्ट गोलकिपरले पाउने गोल्डेन गोल्भ्स भने बेल्जियमका गोल किपर थिबाउट कोर्टोइसले हात पारे । बेल्जियम विश्वकपकाे तेस्राे स्थानमा रह्याे ।
ट्राफिक प्रहरीले अब यस्तो यन्त्र प्रयोग गर्दै ! हेर्नुहोस यस्तो फाईदा
‘मेसीलाई भेट्दा ‘फलेको वृक्ष निहुरिएको’ जस्तै लाग्यो’ -दिपक विष्ट
आज हुने ब्राजिल र स्विजरल्याण्डविचको खेलमा कसले मर्ला बाजी ? तथ्यले यसो भन्छ
कान नसुन्ने सेताे बिरालाेले गरेकाे भविष्यवाणी मिलेपछि गोल्डकपमा यस्तो खैलाबैला